Yintoni abantu abaThengayo? Kutheni Uyidinga nje? Kwaye ubenza njani? | Martech Zone
Yintoni abantu abaThengayo? Kutheni Uyidinga nje? Kwaye ubenza njani?
NgoMvulo, Matshi 15, 2021 NgoMvulo, Matshi 15, 2021 Douglas Karr
Ngelixa abathengisi bahlala besebenza ukuvelisa umxholo owahlulahlula kwaye uchaze izibonelelo zeemveliso zabo kunye neenkonzo, bahlala belahlekile uphawu lokuvelisa umxholo wento nganye uhlobo yomntu othenga imveliso okanye inkonzo yakhe.
Umzekelo, ukuba ithemba lakho lifuna inkonzo entsha yokubamba, umthengisi ujolise ekukhangekeni nasekuguqulweni kunokujolisa ekusebenzeni ngelixa umphathi we-IT angajolisa kwiimpawu zokhuseleko. Kubalulekile ukuba uthethe nobabini- kwaye uhlala ufuna ukuba ujolise nganye kwiintengiso ezithile kunye nomxholo.
Ngamafutshane, imalunga nokwahlula imiyalezo yenkampani yakho kuyo nganye uhlobo yamathemba ekufuneka uthethe nawo. Eminye imizekelo yamathuba aphosiweyo:
Ukuguqulwa -Inkampani igxile kumxholo ofumana eyona ndawo inomdla kwindawo yayo kunokuba ichonge umntu oqhuba uguquko. Ukuba i-1% yabakhenkethi besiza sakho ijika ibe ngabathengi, kuya kufuneka ujolise kwi-1% kwaye uchonge ukuba ngoobani, yintoni ebanyanzele ukuba baguquke, emva koko ubone indlela yokuthetha nabanye abanjengabo.
Industries -Iqonga lenkampani lisebenzela amashishini amaninzi, kodwa umxholo oqhelekileyo kwindawo yabo uthetha nje kumashishini ngokubanzi. Ngokungabinamashishini kumxholo wabo ophakamileyo, amathemba atyelele indawo yabo kwicandelo elithile abakwazi ukubona okanye ukuqonda indlela iqonga eliya kubanceda ngayo.
kwizikhundla -Umxholo wenkampani uthetha ngokuthe ngqo kwiziphumo zeshishini liphela ezibonelelwe liqonga labo kodwa ukungahoyi ukukhetha indlela iqonga elinceda ngayo isikhundla ngasinye kwinkampani. Iinkampani zenza izigqibo zokuthenga ngokubambisana, ngoko ke kubalulekile ukuba isikhundla ngasinye esichaphazelekayo sichazwe.
Endaweni yokugxila kuhlobo lwakho, iimveliso, kunye neenkonzo zokuphuhlisa uluhlu lomxholo obeka indawo nganye, endaweni yoko ujonge inkampani yakho emehlweni omthengi wakho kwaye wakhe umxholo kunye neenkqubo zemiyalezo ezithetha ngqo inkuthazo yabo ukuba ngumthengi wophawu lwakho.
Yintoni umntu woMthengi?
I-personas yomthengi zizazisi ezintsomi ezimele iintlobo zamathemba elithetha kuwo ishishini lakho.
Ukubonisana neBrightspark kunikezela oku infographic yoMntu onguMthengi we-B2Ba:
Imizekelo yabantu abaThengayo
Impapasho efana Martech Zone, umzekelo, ukhonza ii-personas ezininzi:
USusan, iGosa eliyiNtloko leNtengiso -U-Sue ngumthathi-zigqibo xa kufikwa kwitekhnoloji yokuthenga ukunceda iimfuno zentengiso yenkampani yakhe. USue usebenzisa ukupapashwa kwethu kokubini ukufumanisa kunye nezixhobo zophando.
UDan, uMlawuli weNtengiso -UDan uphuhlisa izicwangciso zokuphumeza izixhobo zokunceda ukuthengisa kwaye ufuna ukuqhubeka nobuchwephesha bobuchwephesha kunye nobona bukhulu.
USarah, umniniShishini elincinci -USarah akanazo izixhobo zokuqesha isebe lentengiso okanye iarhente. Bajonge ezona ndlela zilungileyo kunye nezixhobo ezingabizi kakhulu zokuphucula ukuthengisa ngaphandle kokophula uhlahlo-lwabiwo mali.
UScott, uMtyali mali weTekhnoloji yeNtengiso -UScott uzama ukugcina iliso lakhelela iindlela zamvanje kwishishini atyala kulo imali.
UKatie, uMphakathi weNtengiso -U-Katie uya kwisikolo seNtengiso okanye ubuDlelwane bukaRhulumente kwaye ufuna ukuqonda ngcono ishishini ukuze afumane umsebenzi omkhulu xa ephumelele.
Tim, uMboneleli weTekhnoloji yeNtengiso -U-Tim ufuna ukugcina iliso lakhe ngaphandle kwiinkampani zamaqabane akhe ukuze adibanise kunye neenkonzo ezikhuphisanayo.
Njengoko sibhala iiposti zethu, sijonge ukuqinisekisa ukuba sinxibelelana ngqo nabanye baba bantu. Kwimeko yesi sithuba, inguDan, uSarah noKatie esijolise kubo.
Le mizekelo, ewe, ayizizo iinguqulelo ezineenkcukacha-zizinto nje ezingaphaya. Iprofayili yokwenene yomntu inokuthi kwaye ifanele ukungena nzulu ekuqondeni kuyo yonke into yeprofayile yomntu… umzi mveliso, inkuthazo, ubume bokunika ingxelo, indawo yokuhlala, isini, umvuzo, imfundo, amava, ubudala, njl njl. Luya kucaca unxibelelwano lwakho xa uthetha nabathengi bakho.
Ividiyo kubantu abaThengayo
Le vidiyo imnandi isuka UMarketo Iinkcukacha zokuba umntu ongumthengi ubanceda njani ukuba babone izithuba kumxholo kunye nendlela yokujolisa ngokuchanekileyo kubaphulaphuli abanokuthi bathenge iimveliso okanye iinkonzo zakho. UMarketo ucebisa ngezi profayile ziphambili zilandelayo ekufuneka zisoloko zibandakanywa kwiPerona Persona:
igama: Igama lomntu elenziweyo linokubonakala ngathi lisisiyatha, kodwa kunokuba luncedo ekuncedeni iqela lentengiso lixoxe ngabathengi balo kwaye lenze ukuba ibonakale ngakumbi ekucwangciseni indlela yokufikelela kubo.
Age: Ubudala okanye iminyaka yobudala be-persona ivumela ukuqonda kweempawu ezithile ezizukulwana.
Inzala: Ziziphi izinto abazithandayo? Bathanda ukwenza ntoni ngexesha labo lokuzonwabisa? Ezi ntlobo zemibuzo zinokunceda ukumisa umxholo womxholo abanokuthi bazibandakanye nawo.
Ukusetyenziswa kweMidiya: Amaqonga amajelo eendaba kunye namajelo abawasebenzisayo aya kuba nefuthe kwindlela kwaye banokufikelelwa phi.
Ezezimali: Ingeniso kunye nolunye uphawu lwezezimali luya kugqiba ukuba zeziphi iintlobo zeemveliso okanye iinkonzo ezibonisiweyo kwaye yeyiphi inqanaba lamaxabiso okanye unyuselo olunokuba sengqiqweni.
Ubume beBrand: Ukuba bathanda iimveliso ezithile, oku kungabonelela ngohlobo lomxholo abaphendula kakuhle kuwo.
Khuphela indlela yokwenza uMthengi Persona kunye nohambo
Kutheni usebenzisa umntu ongumthengi?
Njengoko i-infographic ingezantsi ichaza, ukusebenzisa ii-personas zomthengi zenze iisayithi amaxesha ama-2 ukuya kwezi-5 asebenze ngakumbi ngokujolisa kubasebenzisi. Ukuthetha ngokuthe ngqo kubaphulaphuli abathile kumxholo wakho obhaliweyo okanye ividiyo isebenza kakuhle kakhulu. Unokuba unqwenela ukongeza imenyu yokuhambisa indawo kwindawo yakho ethile kumzi mveliso okanye kwizikhundla zomsebenzi.
Sebenzisa ii-personas zabathengi kwinkqubo yakho ye-imeyile kukonyusa amaxabiso okucofa kwii-imeyile nge-14% kunye namaxabiso okuguqula nge-10% -ukuqhuba imali ephindaphindwe kali-18 kunokusasaza ii-imeyile.
Esinye sezixhobo ezibaluleke kakhulu kumthengisi esenza iintlobo zeentengiso ezijolise kuzo ezibangela ukwanda kwentengiso kunye notshintsho-njengohlobo olubonwe kwimeko ye-Skytap- ngumthengi persona. Ukuze ufunde okungakumbi malunga nokuba ngubani umntu ongumthengi kunye nendlela abanokuthi baphucule ngayo iziphumo zakho zomkhankaso wentengiso, jonga i-infographic enye ye-infographic entsha- Ithagethi ifunyenwe: INzululwazi yoLuntu loMthengi woLwakhiwo.
I-personas yomthengi yenza ulwakhiwo lwentengiso, ulungelelwaniso kunye nokusebenza ngabaphulaphuli ekujoliswe kubo ngokufanayo xa unxibelelana nabathengi abanokubakho ngentengiso, amaphulo okuthengisa, okanye ngaphakathi kwezicwangciso zakho zokuthengisa umxholo.
Ukuba unomthengi ongapheliyo, ungayinikezela kwiqela lakho lokuyila, okanye kwiarhente yakho, ukugcina ixesha kunye nokwandisa amathuba okusebenza ngokuthengisa. Iqela lakho lokuyila liya kuqonda ithoni, isitayile, kunye nesicwangciso sokuhambisa- kunye nokuqonda apho abathengi baphanda kwenye indawo.
Umntu womthengi, xa imephu iye kwi Ukuthenga iihambo, Nceda iinkampani zichonge izithuba kwizicwangciso zazo zomxholo. Kumzekelo wam wokuqala apho ingcali ye-IT yayixhalabile kukhuseleko, ngoku uphicotho-zincwadi lomntu wesithathu okanye izatifikethi zinokubandakanywa kwintengiso nakwizinto zentengiso ukubeka elo lungu leqela ngokukhululeka.
Uyenza njani i-personas yoMthengi
Sikholisa ukuqala ngokuhlalutya abathengi bethu bangoku size sibuyele kubaphulaphuli ngokubanzi. Ukulinganisa wonke umntu akukho ngqiqweni… khumbula uninzi lwabaphulaphuli bakho alunakuze luthenge kuwe.
Ukwenza ii-personas kunokufuna uphando olunzima kwimephu yokuthandana, uphando lwe-ethnographic, webokisim, amaqela ekugxilwe kuwo, kubahlalutyi, uphando, kunye nedatha yangaphakathi. Rhoqo kunoko, iinkampani zijonga kwiinkampani zophando zentengiso ezenza inani labantu, ifemagraphic, kunye nohlalutyo lobume besiseko sabathengi, emva koko benza uthotho lodliwanondlebe olusemgangathweni kunye nobungakanani kunye nesiseko sabathengi bakho.
Ngelo xesha, iziphumo zahlulwe, ulwazi luhlanganisiwe, umntu ngamnye ogama linguye, iinjongo okanye ukubizelwa inyathelo kunxityelelaniswe, kunye neprofayili eyakhiweyo.
Abathengi babathengi kufuneka baphinde baqwalaselwe kwaye balungiswe njengoko umbutho wakho uhambisa iimveliso kunye neenkonzo zawo kwaye ufumana abathengi abatsha abangalungelanga ngokwendalo kwii-personas zakho zangoku.
tags: Ukubonisana nebrightsparkumthengi persona infographicividiyo yomthengiabantu abathengiuhambo lokuthengayenza umntu womthengiumzekelo umntuUyenza njani i-personas yomthengiimephu yohambo lwabathengiuphawuIprofayile yomntuuphando lomntuabantuipanda enobuchuleZithini izinto zomthengiKutheni usebenzisa ii-personas zomthengi
Izinto ezichaphazelayo ukuba iPhepha lakho lilayisha ngokukhawuleza njani kwiWebhusayithi yakho
Iimpawu ezi-6 eziphambili zoRhwebo lweLogo